‘म उभिनु भनेको नै कालोबजारी सतर्क हुनु हो’ – उद्योगमन्त्री भट्ट – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Nov 26, 2019 29 0
काठमाडौं, १० मंसिर । नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउँदै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अहिलेको भन्दा दोब्बर योगदान पुर्याउनेगरि आफूले काम गर्ने बताएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र चीनबाट पाईपलाईनमा नेपालमा तेल ल्याउनेपनि उनको दाबी छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री भट्टले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई पूरा गर्नको लागि आफू सक्रिय भएर लाग्ने बताउँदै उनले भने,‘यो नारामा ठूलो कुरा लुकेको छ, हामी यसलाई साकार पार्नको लागि दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौं । जबसम्म जनता सुखी हुँदैनन्, तबसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैनन् । मुलुक समृद्ध नभएसम्म फेरी जनता सुखी हुँदैनन् । यसमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ ।’ मुलुक औद्योगीकरणको बाटोमा गैसकेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘कृषि, पर्यटन सबैलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्छौं । हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । त्यहीअनुसार कृषि मन्त्रालयले योजना र तयारी गरिरहेको छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले सञ्चालनमा रहेका केही सरकारी रुग्ण उद्योगहरुलाई गतिका साथ सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा आफूहरु लागेको पनि सुनाए । ‘सरकारी उद्योगहरुले मुनाफा हासिल गर्न सकेका छैनन् । अब यसलाई मुनाफातर्फ लैजानको लागि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’–उनले भने ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लागि पनि औद्योगीकरणको वातावरण बनाउनको लागि आफूले आवश्यक पहल गरिरहेको मन्त्री भट्टले सुनाए । उनले भने,‘औद्योगीकरणको लागि वातावरण बनाउनको लागि आवश्यक पहल भैरहेको छु । कतिपय ऐन, कानूनहरु बनिसकेका छन् । कतिपय कार्यविधिहरु बन्ने प्रक्रियामा छन् ।’ आफू भर्खरै मन्त्रालयमा आएकोले अहिले छलफलको क्रममा नै रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘अब सुस्त गतिमा हिँडेर काम छैन्, हामी गतिमा काम गर्नेगरि अघि बढ्छौं ।’
त्यस्तै, उनले केही नयाँ औद्योगिक क्षेत्रपनि घोषणा भएका र केही घोषणा हुने क्रममा रहेको सुनाए । उनले भने,‘केही क्षेत्रहरु घोषणा भैसकेका छन् । कतिपयहरु घोषणा हुने क्रममा छन् । कतिपयको डिपिआर र आई.ई.ए. भैरहेको छ ।’ मन्त्री भट्टले दुई मुलुकसँग बन्दरगाहा र नाका खोल्ने कामपनि भएको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो राज्यमन्त्री औद्योगिक क्षेत्रकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी सामूहिक छलफल र निर्णयमा जान्छौं । हिजोमात्रै पनि मैले उहाँसँग छलफल गरेको छु ।’
उनले जनताका चाहना पूरा गर्नतर्फ आफ्नो मन्त्रालय दत्तचित्त भएर अघि बढ्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न हामी गम्भिर छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूको उद्देश्यअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं । जनताका सबै आकांक्षा र सपना पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो सक्रिय सहभागिता र प्रभावकारी काम हुनेछ ।’ राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको बारेमा आएका कुरा आफूलाई त्यति ठूलो नलागेको पनि उनको प्रतिक्रिया छ । उनले भने,‘उहाँसँग मैले दुई तीन पटक छलफल गरेको छु । हामी सहकार्य गरेर जान्छौं । उहाँको बारेमा आएका कुरा धेरै ठूलो हो भन्ने मलाई लाग्दैन् । अब मैले नबुझेको कुरामा टिप्पणी गर्नुपनि राम्रो हुँदैन् ।’
उनले आफू धेरै कुरा गर्नेभन्दापनि काम गर्ने व्यक्ति भएकोले सोहीअनुसार अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘अरुलेजस्तै म ठूलो कुरा गर्ने मान्छे होईन् । म त काम गर्ने मान्छे हुँ । म मेरो क्षमता र तागदअनुसार यो देशलाई समृद्ध बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्छु । म पूरा ईमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्छु ।’
उनले निजी क्षेत्रका उद्योगहरु नाफामा गएका तर सरकारी उद्योगहरु घाटामा जानुको कारणबारेपनि आफूहरुले अध्ययन तथा अनुशन्धान गरिरहेको बताए । उनले भने,‘निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त छ । सरकारी उद्योगहरु हाम्रो हो भन्ने भावना नै भएन् । व्यवस्थापनमा बसेकाहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको देखियो । अब त्यस्तो हुँदैन् । व्यवस्थापनमा बसेकाहरुले सरकारी उद्योगपनि हाम्रो हो भन्ने भावनासहित अघि बढ्नुपर्छ । यसको लागि योग्य व्यवस्थापक दिनुपर्छ । काम गर्ने कार्यशैली र सोचन बदल्नुपर्छ । सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्याउँछ ।’
नेपाललाई कृषिलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पर्याप्त पहल भैरहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘कृषि मन्त्रालयले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि आफ्नो रणनीति र योजनाहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिले हामीले चामल धेरै आयात गरेका छौं । चामलमा आत्मनिर्भर हुनको लागि धान जोन अघि सारिएको छ । यो कुरा प्रदेशका कृषि मन्त्रालयहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लागेका छन् । धानजस्तै मकै, आलु, प्याजलगायतमा पनि आत्मनिर्भर हुने योजना छ । अब हामी यी वस्तु निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । सोहीअनुसार काम गर्नेछौं ।’
उनले तरकारीमा धेरैजसो आत्मनिर्भर भैसकेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘अहिले डढेलधुराबाट भारतको नयाँ दिल्ली तरकार निर्यात हुन्छ । सल्यानबाट काठमाडौं र भारतसम्म तरकारी निर्यात भैरहेको छ ।’ नेपालमा केहीपनि हुँदैन् भन्ने मनोविज्ञान अब बदल्न जरुरी रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘त्यो चिन्तन बदल्नुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरि काम गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुरयाउनुपर्छ ।’ यद्धपी कतिपयले विदेशमा सिकेका सपी र अनुभवलाई स्वदेशमा लगाई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको पनि उनले सुनाए ।
मन्त्री भट्टले आफूले घरमा भैंसी पालेको सुनाए । उनले भने,‘मेरो घरमा मैले भैंसी पालेको छु । घरमा दुध किन्नुपर्दैन् । सबैले गाई, भैंसी पाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने दुद्यमा हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं ।’ उनकाअनुसार नेपाल अहिलेपनि सिमेन्ट, विजुली, माछा, मासु र छडमा आत्मनिर्भर भैसकेको छ । नेपालमै फलामी खानी रहेको कुरामा अनुशन्धान भैरहेको र यसको गुणस्तर परीक्षणको लागि चीन पठाईएको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हामी फलामी खानीको उत्खननकोल ागि संयन्त्र बनाउनेतर्फ छलफल गरिरहेका छौं ।’
केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो र सकारात्मक योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले भने,‘म त निमित्त मात्रै हुँ, सबैले सकारात्मक भएर आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ उनले बजार अनुगमनको लागि पनि आफूले कडा कदम चाल्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘बजार अनुगमन गर्ने हो । तर, अनुशासन स्थापित गर्ने कुरामा सबैले ईमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्छ । स्व–अनुशासनको पनि कुरा हुन्छ । राज्यले सधैं अनुगमन गरेरमात्रै पुग्दैन् । हामी व्यवसायीहरुलाई जनता र देशप्रति उत्तरदायी बनाउने दिशामा लाग्नेछौं ।’ आफूले समस्या समाधानको लागि कडा कानून ल्याउने तयारी गर्न लागेको पनि उनको भनाई छ ।
अहिले अत्यावाश्यक वस्तुमा मृल्यवृद्धि हुनुको कारण भने उत्पादनमै कमी भएकोपनि उनले सुनाए । उनले भने,‘अहिले प्याज लगाउने सिजन छ । प्याजमा आत्मनिर्भर हुनको लागि हामी सबैले आफूलाई पुग्ने उत्पादन गरौं ।’ किसानहरुको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिनेगरि आफूहरु छलफलमा जुटेको र सोहीअनुसारको संयन्त्र बनाउनेपनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिनेगरि नीति र योजना ल्याउँछौं ।’ उनले आगामी तीन वर्षसम्म नेपालमा चीनबाट पाईपलाईनमा तेल ल्याउनेपनि दाबी गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुभयो भने म तीन वर्ष अझै मन्त्रीको रुपमा रहन्छु, चीनबाट पाईपलाईनमा तेल ल्याउँछौं । यो सपना हामी पूरा गरेर छोड्छौं । यसको लागि हामी सबै सामूहिक दायित्वबाट जानुपर्छ ।’ उनले आफू उभिनु भनेको नै कालाबजारीहरु सतर्क हुनु भएको टिप्पणी गरे ।
भारतले मिचेकाे नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्छुः प्रधानमन्त्री ओली